सातु र सर्वत दान एवं सेवन गरी अक्षय तृतीया पर्व मनाइँदै
आँप खाए लगत्तै भुलेर पनि नखानुहोस् यी खानेकुराहरु
एजेन्सी । गर्मी मौसम आँपको स्वाद लिने मौसमका रुपमा चिनिन्छ । आपलाई फलफूलको राजा पनि भनिन्छ, यसको विशेष स्वादका कारण प्रायः मानिसहरूले आप खान चाहान्छन्। आप खानुका धेरै फाइदाहरू छन् । तर, के तपाईंलाई थाहा छ आप खाएपछि केही खाने कुरा भने खानुहुँदैन, अन्यथा यसले स्वास्थ्यमा ठूलो नोक्सानी गर्छ ।
शरिरमा भिटामिन डीको कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?
एजेन्सी । जब शरिरको कोषमा सूर्यको प्रकाश पर्छ तब कोलस्टोरको मद्धतमा कोषले भिटामिन डी निर्माण गर्छ। भिटामिन डी हाड, दाँत र मसल्स स्वस्थ राख्न भिटामिट डी चाहिन्छ।
यी मानिसहरुले खानुहँदैन भुइँकटर, यस्ता छन् बेफाइदाहरु
यस्ता खानेकुराहरु सँगसँगै नखानुहोस्
एजेन्सी । कतिपय खानेकुराहरु खाँदा हामीले होस पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । खानेकुरा खानेमात्र भनेर हुदैन । कुन चिज कहिले खाने के सँग खाने के सँग नखाने यस्ता कुराहरु पनि बुझ्नु जरुरी छ । अन्यथा हामीले खानाबाट बिष पाइरहेका हुन्छौ ।
तौल घटाउन केराको जुस !
बिहान बिहान किन खाने केराको जुस ?
वास्तु टिप्सः श्रीमान्–श्रीमतीबीच झगडा भइरहेको छ भने बाँसुरीले गर्छ चमत्कार, बाँसुरीलाई घरमा यसरी राख्नुहोस्
एजेन्सी । वास्तुशास्त्रमा बाँसुरीको बारेमा चर्चा गरिएको छ । बाँसुरी भगवान कृष्णको सबैभन्दा मनपर्ने सांगितीक वस्तु थियो।